Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho oo maanta Aanan Shaqeyneynin – STAR FM SOMALIA
Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho oo maanta Aanan Shaqeyneynin
Doorashada madaxtinimada dalka awadeed, ayaa waxaa maanta loo hakiyay hawlihii shaqo ee ka jiray Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, iyadoo maanta lagu wado in madaxweyne lagu doorto magaalada.
Doorashada, ayaa waxaa lagu wadaa in ay ka qabsoomto dhisme ku yaala inta u dhaxeyso Garoonka Aadan Cadde iyo Xaruntii Ciidamada Cirka ee Afisyooni, waxaana si wayn loo adkeeyay amniga Caasimadda Muqdisho.
Wasiirka Gaadiidka & Duulista Hawada Somaliya, Cali Axmed Jaamac (Jangeli), ayaa Warbaahinta u xaqiijiyay in la joojiyay duulimaadyadii maanta imaan lahaa Magaalada Muqdisho, sidoo kalana waxaa uu cadeeyay inaanay jirin duulimaadyo ka ambabaxa Garoonka Aadan Cadde.
Wasiirka, ayaa ku waramaya in doorashada darteed loo baajiyay hawlihii shaqo ee Garoonka, isagoo intaa ku daray in la fasaxay dhammaanba shaqaalihii ka hawlgelaayay Garoonka Muqdisho.
C/fitaax Cali Warsame oo ka mid ah shaqaalaha ka hawlgala Garoonka Aadan Cadde, ayaa sheegay in gelinkii dambe ee Talaadadii ay fasax galeen shaqaalaha, dibna ay shaqada ugu soo laaban doonaan Khamiista berrito ah.
C/fitaax Cali Warsame ayaa wuxuu sheegay in boqolaal askari la soo dhigay wadooyinka soo gala Garoonka, si ay u xaqiijiyan nabadgelyada.
Ciidamada Nabad Suggida iyo Booliska ka hawlgala Magaalada Muqdisho, ayaa waxaa lagu arkayaa wadooyinka ku yaala Bartamaha Muqdisho, si ay u fuliyan awaamiirta sida ku meel gaarka ihi loogu xanibay gaadiidka.
Musharax Sheekh Shariif oo ugu baaqay Xildhibaanada Baarlamaanka inay codkooda siiyaan
Waxaa Laga Dareemayaa Magaalada Muqdisho Olalihii Ugu Danbeeyey Ay Sameenayaan Musharaxiinta